Warshad Boorsooyin Lay-fidsan | Shiinaha Lay-flat Pouches Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal
Saddex qaybood oo isku xidha shaati, oo sidoo kale loo yaqaanno boorsooyin fidsan, ayaa laga shaabadeeyey labada dhinac iyo hoose, korna waa loo daayey si loo buuxiyo waxa ku jira. Noocyada noocan ahi waa kuwo kharash-ku-ool ah, oo aan ahayn fudud oo keliya in la buuxiyo badeecadaha laakiin sidoo kale waxay cunaan waxyaabo badan. Waa ikhtiyaarka ugufiican ee fudud, hal ku adeegid, marka lagu jiro cunnooyinka fudud ama alaabooyinka cabbirka loo isticmaalo si loogu bixiyo. Boorsooyinka fidsan ayaa sidoo kale ah xulasho caan ah oo loogu talagalay baakadaha faakiyuumka iyo baakadaha cuntada la qaboojiyey.
Boorsooyinka barkinta ayaa ah mid ka mid ah kuwa soojireenka ah ee dhaqanka iyo waqtiga jecel ee baakadaha dabacsan, waxaana loo adeegsaday xirmooyin noocyo kala duwan ah. - dhinac ahaan badiyaa waa looga tagaa iyadoo la buuxinayo waxyaabaha ku jira.
Boorsooyinka dhinaca gusseted Side waxay leeyihiin laba dhinac oo gussets ah oo ku yaal dhinacyada dhinacyada boorsooyinka, iyaga oo kordhiya awoodda kaydinta, ayaa ah xulasho weyn oo lagu xirayo mug badan oo alaab ah. Ka sokow, noocyada noocan ah waxay qaadanayaan qol yar iyada oo wali la siinayo meelo badan oo shiraac ah si loo muujiyo loona suuq geeyo astaantaada. Iyada oo la adeegsanayo sifooyinka qiimaha yar ee wax soo saarka, indho qabashada nolosha iyo qiimaha tartanka ee iibsiga, boorsooyinka dhinaca gusset waa qayb muhiim ah oo ka tirsan warshadaha baakadaha dabacsan.
Xakamaynta Vacuum waa hab xirxirida oo ka saarta hawada baakadka kahor intaadan shaabad dhigin. Ujeedada baakidhka faakiyuumku badanaa waa in oksijiin laga soo saaro weelka si loo kordhiyo nolosha cuntada, iyo in la qaato foomamka baakadaha oo rogrogmi kara si loo yareeyo waxyaabaha ku jira iyo mugga baakadka.